सल्यानले बिकाशको गतिलिन ज्वाला र बस्नेतले राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्छ । :गुलाबजंग शाह « Gurash Online
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेसँगै दुई खेमामा विभाजन भएको नेकपा ले छुटाछुटै आफु समर्थक कार्यकर्ता, युवासंग, तथा विद्यार्थी संगठनका कार्यक्रम गरिरहेका छन। मंगलबार आज सल्यानमा पनि (प्रचण्ड-नेपाल) र ओली पक्षधर नेकपाको भातृसंगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु ले छुट्टा छुट्टै भेला गरेका छन् ।
केपी ओली पक्षधर बिद्यार्थी र युवा संगठनको जिल्ला अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा भएको छ । कार्यक्रमलाई नेकपा ओली पक्षधर केन्द्रीय सदस्य गुलाबजंग शाह , मनोनित नयाँ केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पुन ,लोक बहादुर डागी कुलबहादुर गिरी लगायतले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए ।
जिल्ला अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश संसद गुलाबजंङ शाहले एउटै व्यक्ति धेरै पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री रहन आवश्यक नरहेको बताएका छन् । (प्रचण्ड- माधव) पक्षधर मा लागेकाहरु सधै पदमा रहिरहन खोजेकाले पार्टीबाट अलग्गिएको समेत उनले बताए।
माधव नेपाल र प्रचण्ड पहिलेदेखि नै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भइसकेकाले अहिले स्थिर सरकारको पक्षमा रहनुपर्नेमा, प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदमा आँखा गाडेकोले नेकपा बिभाजन अवस्थामा पुगेकोे उनको आरोप छ । केपी शर्मा ओलीलाई ५ वर्ष सरकार चलाउन दिएर अर्को पाँच बर्षको लागि आफू तयार रहनु पर्नेमा सरकार ढाल्ने तर्फ अग्रसर रहेको उनले बताएका छन् ।
यता सल्यानमा पनि यस्तै स्थिति रहन गएको पनि उनको भनाई छ । माधव पक्षधर सल्यानका नेता प्रकाश ज्वालाले आफु बाचुन्जेल संसद र मन्त्री हुन चाहेकाले सल्यानमा पूर्वएमाले एक नभएको बताए । नेता ज्वालाले २०४८ सालदेखि नै आफू पदमा रहेर पनि अहिले नयाँ पुस्तालाई छोड्न नसकेको शाहले बताए ।
पूर्व माओवादीको तर्फबाट संसद रहेका टेकबहादुर बस्नेतले पनि नयाँ पुस्तालाई अगाडि सार्न नचाहेको शाहको आरोप छ । बस्नेत दुई/दुई पटक मन्त्री भइसक्दा पनि केही गर्न नसकेको उनले बताए । बस्नेत लाई सल्यानले दुई/दुई पटक मन्त्री पायर पनि पनि जिल्लामा केही गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए। जिल्लामा रहेको राप्ती राजमार्गको हालत देखेर उहाँहरुलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । यसको स्तरउन्नती कहिले हुने? सल्यान जिल्लाले बिकास कहिले पाउने? भन्दै उहाँहरुले राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्छ। उहाँहरु पदमा रहदा सम्म जिल्लाले बिकासको गति लिन नसक्ने शाहको भनाई रहेको छ ।